Ukuhlaziya uLwesihlanu: I-Tolino kunye ne-Kindle zifumana utshintsho olutsha | Zonke iiReaders
Ukuhlaziya uLwesihlanu: I-Tolino kunye ne-Kindle zifumana utshintsho olutsha
UJoaquin Garcia | | Amazon Kindle, I-eReaders, Tolia
Kukhutshwe uhlaziyo oluphambili kwii-eReaders kwezi ntsuku. Phakathi kwabo, uhlaziyo lweAmazon Kindle kunye nohlaziyo lweTolino lubonakala. Eyokuqala, Ukuhlaziywa kohlobo lweAmazon, kusebenza kuzo zonke iAmazon eReaders, Uhlobo lweOasis lubandakanyiwe.
Uhlaziyo lweTolino luchaphazela kuphela i-eReaders ezindala, Oko kukuthi, I-eReaders ngaphambi kweTolino Vision 4 HDnjengoko inesoftware yale modeli yamva nje. Zombini uhlaziyo zinokukhutshelwa nge-OTA okanye ngokuzikhuphela kwikhompyuter yethu kunye nokwenza ufakelo olwenziweyo.
Uhlaziyo lohlobo lolona lulindelwe lukhulu kubo bonke, ngabo bonke abasebenzisi ekudala bekho cela oonobumba abangqindilili kwisicatshulwa. Oku kunokwenzeka kufakwe kuhlaziyo lwamva nje oluthi IneKhowudi yeFirmware 5.8.7.
IAmazon neTolino banezinto ezintsha ezihlaziyiweyo ezifumaneka kwii-eReaders zabo
Le firmware intsha iphinda ilungise iingxaki kunye neebugs ezinayo isoftware yohlobo lwe-eReader, nangona kungekho nto ikhankanyiweyo. kwingxaki yeAmazon FreeTime, ke le ngxaki ayinakuyilungisa okwangoku.
Uhlaziyo lweTolino lubandakanya Zonke iindaba zesoftware ezivela kwimodeli yakutshanje yeTolino ukuya kwezinye iimodeli. Oku kunomdla kuba kuya kwenza ukuba kube lula ukuboleka iincwadi ngeemodeli ezindala zeTolino kunye nokuzibuyisa kwi-eReader yethu ngaphandle kokuya kwithala leencwadi emsebenzini.
Olu hlaziyo luza kudityaniswa nee-eReaders zethu kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, mhlawumbi kule mpelaveki. Nangona kunjalo, njengoko besitshilo ngaphambili, ukuba awufuni kulinda, ungasoloko uyenza ngesandla. Ukufumana isoftware entsha, kuya kufuneka uyikhuphele kwezi linki zilandelayo:
Ukongeza kwiindaba, isoftware entsha lungisa iingxaki zokhuseleko okanye iibugs eziyingozi ke zama ukuhlaziya isoftware yakho ye-eReader njengoko iza kusebenza ngcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » Ukuhlaziya uLwesihlanu: I-Tolino kunye ne-Kindle zifumana utshintsho olutsha
Kulungile kakhulu kuhlaziyo lokugqibela lohlobo, ileta entsha imnandi kakhulu, amanqaku ali-10
IAmazon Polly, ilizwi eliza kuhamba nathi xa sifunda
I-European Union inokunika iVAT encitshisiweyo kwiincwadi zeencwadi